Lalàna Vaovao Ho An’ny Skype sy Viber any Bahrain · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2013 1:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Swahili, English
“Antony Fiarovana” no lazaina fa antony mahatonga ny fepetra vaovao izay mety hamarana ny fampiasana ny tolotra malaza tahaka ny Skype, WhatsApp, Viber ary Tango any Bahrain.
Notsongain'ny gazety ny fanambaran'ny minisi-panjakana misahana ny serasera Fawaz bin Mohammed Al Khalifa fa nampidirina ny fitsipika vaovao misahana ny fampihatra Voice Over Internet Protocol (VoIP) [feo ao amin'ny arofenitry ny aterineto], izay lasa malaza eo amin'ny reniparitry ny Helodrano, ahitana mpisera an-tapitrisany mifanakalo vaovao, fomba fijery, sary ary kivazivazy tsotsotra isan'andro ary manao antso maimaipoana amin'ny namana sy ny fianakaviana.
Notsongaina i Al Khalifa tamin'ny fitenenana hoe:
Ny anton'ny fepetra dia ny mba tsy hisian'ny fanitsakitsahana ny fomba sy ny riba ankoatra ny lafiny fiarovana. Ao anatin'ny ezaka ataon'ny Filankevi-Piaraha-miasa ao amin'ny Helodrano ny fiantohana ny lalàna izay miaro ny zon'ny mpandraharaha sy ny mba tsy isian'ny fanararaotana tafahoatra amin'ireny fampihatran'ny fifandraisana ireny”
Nolazainy fa ho fiarovana ny sehatry ny fifandraisana ao amin'ny firenena no anton'izany, ankoatra ny fisian'ny fanadihadiana nampiseho fa “olona 100.000 ao Bahrain no mampiasa ny VoIP ao anatin'ny efatra andro.”
Heverina fa ny nakan'i Bahrain sopapa dia i Arabia Saodita, izay efa nandrara ny fiseraserana ny Viber ao amin'ny Fitondram-Panjaka. Nosakanan'i Arabia Saodita ny fampihatran'ny fifandefasan-kafatra eo noho eo tamin'ny 5 Jona 2013, taorian'ny fandrahonana hisakana rindrambaiko voaaro, raha vao tsy mamela ny hitsikilovana ny mpiserasera io rindrambaiko io. Ireo Tolotra hafa norahonan'ny manampahefana Saodiana hosakanana koa dia ny Skype sy ny fandefasan-kafatra WhatsApp.
Araka ny @Comms_BH, kaonty Twitter voamarina, izay milaza ny tenany ho kaonty ofisialin'ny Minisiteram-Panjakana Misahana ny Serasera dia:
Nanao fikaroha-panadihadiana ny amin'ny tokony hametrahana fanaraha-maso ny fampiasana ny teknolojian'ny VoIP ny Minisitera. #Bahrain
Natao ny fepetra ho fisorohana izay mety ho fanitsakitsahana hitamaso ny maoraly sy ny fomban-drazana ary ny hijerena ny lafiny fiarovana.
Ny tanjon'ny lalàna ny ny Fitsipika dia ho fiarovana ny ango-kevitra sy ho fanampiana tosika ny fiarovana ny antso iraisampirenena sy ny tambajotran'ny fifandraisandavitra.
Naneho ny fahatalanjonany tamin'ny nandrenesana ny vaovao ny mpiserasera.
Nanontany i Ahmedroid:
Hanao veloma ny VoIP maimaipoana ve isika?
Nanampy i Rasha Yousif:
Handoro kodiarana aho raha sakanan'i @Comms_BH ny viber, tango na ny Skype
Ny fandoroana kodiarana sy ny fanaovana barazy no endri-panoherana malaza any Bahrain mikorotandrotana, izay ahitana fihetsiketsehana saika isan'andro hatramin'ny 14 Febroary 2011.
Tamin'ny 12 Marsa, Andro Manerantany ho Fanoherana ny Sivana an-tSerasera, Notononin'ny Reporters Sans Frontières ho iray amin'ny fanjakana fahavalon'ny aterineto i Bahrain – “fanjakana mpitsikilo manaramaso hatrany ny serasera ka miafara amin'ny fanitsakitsahana mampanahy indrindra ny zon'olombelona.” Ny firenena efatra hafa dia i Syria, Shina, Iran ary i Vietnam.